Waa maxay farriinta Kitaabka - Buugga? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Kitaabka Quduuska macnihiisu waa ‘Kitaabka’. Kitaabka Quduuska ah wuxuu ahaa qoraalkii ugu horreeyey taariikhda ee laga dhigo foomka buugga oo aan maanta aragno. Kitaabka Quduuska ah waa buug ah oo ay ku jiraan baaxaddiisa dhammaan dadyowga iyo quruumaha dhulka jooga. Sidaas oo kale, buuggan weyn waxaa lagu turjumay ku dhawaad ​​dhammaan afafka dhulka. Kitaabka Quduuska ah wuxuu saamayn weyn ku yeeshay umado badan, waana buugga ugu akhriska badan meeraha. Laakiin buuggani sidoo kale waa buug dheer, oo leh sheeko adag. Haddaba in badan oo naga mid ah ma garanno mana fahmin dulucda buuggan. Maqaalkani wuxuu ka qaadan doonaa hal jumlad Kitaabka Quduuska ah si uu u sharaxo sheekada buuggan caadiga ah – waa shaqadii Ciise Masiix.
Kitaabka Quduuska ah waxaa la siiyay si uu wax uga qabto dhibaato dhab ah oo mustaqbalkayaga ah. Dhibaatadan waxaa lagu sharraxay Suuradda al-Mujadila (Surah 58-Haweeneyda Baryootameysay) iyadoo fiirineysa maalinta qiyaame ee soo socota
Maalinbuuna ihaanayn Ilaahay uu soo bixin dhammaantood, ugana warrami waxay camal faleen, Eebana waa koobay iyana waa hilmaameen Ilaahayna wax kasta wuu daalacan (arkaa).Ma ogtahay in Ilaahay ogyahay Cirka iyo Dhulka waxa ku jira, Seddexdii faqiba Ilaahay baa afreeya, Shantana Ilaahay baa Lixeeya; waxa ka yar iyo waxa ka badanba Ilaaahaybaa la jooga meeshay ahaadaanba, wuxuuna uga qarrami waxay camal faleen Maalinta Qiyaamo Ilaahayna wax walba waa ogyahay.
Suuradda al-Mujadila 58: 6-7
Suuradda al-Mujadila waxay noo sheegaysaa inaysan jirin wax qarsoon oo uusan Eebbe naga aqoon, oo uu u adeegsan doono aqoontan inuu nagu xukumo.
Suuradda al-Qiyaamah (Surah 75-Qiyaame) waxay maalintan ku magacawday ‘Maalinta Qiyaamaha’ sidoo kale waxay ka digaysaa sida qofka loo hormarin doono si uu ugu jawaabo noloshiisa.
Wuxuu Dhihi Dadku Maalintaas xagee loo cararaa.Saas ma aha ee ma jiro wax la magan Galo (Eebe Mooyee).Xagga Eebahaa yaana Maalintaas loo ahaan.Waxaa looga warrami dadka Maalintaas wuxuu hormarsaday iyo wuxuu Dibmarsaday.Ruux walbana Naftiisa isagaa ku maragfuri. Si kasta Hadduu u cudurdaartana (wax uma tarto).
Suuradda al-Qiyaamah 75: 10-15
Haddaba maxaan yeelnaa haddii ay jiraan ujeedo iyo falal nolosheenna oo aan ka xishoonayno? Farriinta Kitaabka Quduuska ah waxaa loogu talagalay kuwa xanbaarsan arrintan.
Waxaan baarnay usbuucii ugu dambeeyay ee Ciise Masiix. Injil wuxuu qoray in iskutallaabta lagu qodbay maalintii 6 -Jimce Wanaagsan, waxaana dib loo soo nooleeyay Axaddii xigtay. Tan waxaa lagu sii arkay Tawreedka iyo Sabuurrada iyo Nabiyada. Laakiin sababta ay tani u dhacday maxayse macno noo leedahay aniga iyo adiga maanta? Halkan waxaan ku dooneynaa inaan fahanno waxa uu bixiyay Ciise Masiix,iyo sida aan ku heli karno naxariis iyo dambi dhaaf. Tani waxay naga caawin doontaa xitaa inaan fahanno madaxfurashada Ibraahim ee lagu sharraxay Suuradda Al -Saffat (Surah 37), Surah al Faatihah (Surah 1 – Furriyaha) markay weydiisato Eebbe inuu ‘na tuso Jidka Toosan’, iyo sidoo kale fahamka sababta ‘Muslim’ macnihiisu waa ‘mid soo gudbiya’, iyo sababta xafladaha diimeed sida wududa, zakada iyo cunista xalaasha ay u wanaagsan yihiin laakiin aan ku filnayn niyadda wanaagsan naftooda maalinta Qiyaame.
Warka Xun – waxay Nebiyadu ka sheegaan xiriirka aan la leenahay Ilaah
Tawreedku wuxuu baraa in markii Eebbe abuuray aadanaha uu isagu yiri
“Sawir” looma jeedo dareen jireed, laakiin waxaa la inooga dhigay inaan isaga ka tarjumno habka aan u shaqaynay dareen ahaan, maskax ahaan, bulsho ahaan iyo ruux ahaanba. Waxaa naloo abuuray inaan xiriir la yeelanno Isaga. Waxaan ku arki karnaa xiriirkan bogga hoose. Abuuraha, oo ah taliye aan dhammaad lahayn, ayaa la dhigayaa meesha ugu sarraysa halka ninka iyo naagta la dhigayo sagxadda sibidhka maadaama aan nahay xayawaan xaddidan. Xiriirka waxaa muujiya fallaarta isku xirta.
Waxaa laga abuuray araggiisa, dadka waxaa loo sameeyay inay xiriir la yeeshaan Abuuraha
Eebbe dabeecaddiisu waa kaamil – Waa Quduus. Sababtoo ah Sabuurku wuxuu leeyahay
4 Waayo, adigu ma ihid Ilaah xumaanta ku farxa, Oo shar adiga kula jiri maayo.
5 Kan ismadax-weyneeya hortaada soo istaagi maayo, Oo waxaad neceb tahay xumaanfalayaasha oo dhan.
Aadam wuxuu sameeyay hal fal caasinimo – kaliya hal- oo Quduusnimada Eebbe ayaa ka rabtay inuu xukumo. Tawreedka iyo Qur’aanka waxay qoreen in Eebbe ka dhigay mid dhimanaya oo eryay Xaadarnimadiisa. Isla xaaladdaas ayaa noo jirta. Markaan dembaabno ama ku caasiyono si kasta waxaan u xushmeyneynaa Allah maadaama aanan u dhaqmin sida ku cad sawirka nalagu sameeyay. Xiriirkeenna wuu jabay. Tani waxay keenaysaa caqabad adag oo sida derbiga dhagaxa ah oo innaga iyo Abuuraheenna dhexdooda ah.
Dembiyadeenu waxay naga dhex abuuraan caqabad adag annaga iyo Ilaaha Quduuska ah
Daloolinta xayndaabaka dembiga ee mudnaanta diinta
In badan oo inaga mid ah waxay isku dayaan in ay xayndaabkan innaga iyo Eebbe inaga dhex maraan falal diimeed ama shuqullo oo hela mudnaan ku filan si ay u jebiyaan darbiga. Salaadaha, soonka, xajka, masjidka oo la aado, sakada, sadaqada samafalka ayaa ah siyaabaha aan ku doonayno inaan ku kasbanno mudnaan si aan u daloolno xayndaabka sida ku cad sawirka soo socda.
Waa maxay dammaanad -qaadkeenna ah in camalladeenna wax -ku -oolka ahi ay ku filnaan doonaan in la tirtiro dembiga oo la dalooliyo xayndaabka ina dhex maray annaga iyo Abuurahayaga? Ma ognahay haddii dadaalladeenna ujeeddooyinka wanaagsan ay ku filnaan doonaan? Ma lihin wax dammaanad ah sidaa darteed waxaan isku daynaa inaan sameyno intii karaankeenna ah waxaana rajeyneynaa inay ku filnaan doonto Maalinta Qiyaame.
Waxaan ku dadaalaynaa inaan ka fogaano dadka, walxaha iyo cuntada na wasakheynaya. Laakiin nebi Ishaaciya ayaa shaaca ka qaaday in:
Ishacyaah 64: 6
Nebigu wuxuu noo sheegayaa in xitaa haddii aan iska ilaalinno wax kasta oo na nijaasiya, dembiyadeennu waxay ka dhigi doonaan ‘camalladeenna xaqa ah’ kuwo aan waxtar lahayn’calal wasakhaysan’ oo na nadiifinaya.
Warka Daran: Awoodda Dembiga iyo Geerida
Nebi Muuse wuxuu si cad u qeexay halbeegga Sharciga ee ah in loo baahan yahay in la -adeeco. Sharcigu marna ma dhihin wax u eg “isku day inaad raacdo inta badan amarada”. Dhab ahaantii Sharcigu wuxuu ku celceliyay marar badan in shaqada kaliya ee xaqiijinaysa bixinta dembiga ay tahay dhimasho. Waxaan aragnay xilligii Nuux iyo xitaa xaaskii Luud in geeridu ka dhalatay dembi.
Injilku wuxuu ku soo koobayaa runtaan sidan soo socota:
Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada…
“Dhimasho” macno ahaan macnaheedu waa ‘kala tag’. Markay naftu ka soocdo jidhkeena waxaan u dhimannaa jidh ahaan. Sidoo kale waxaan hadda ka go’nay xagga Ilaah xagga ruuxa oo waxaannu nahay kuwo dhintay oo nijaas ah hortiisa.
Tani waxay muujinaysaa dhibaatada rajadeenna ee ah inaan helno mudnaan aan ku bixinno dembiga. Dhibaatadu waxay tahay dadaalladeenna adag, mudnaanta, ujeeddooyinka wanaagsan, iyo ficilladeenna, in kasta oo aysan khalad ahayn, kuma filna sababta oo ah bixinta loo baahan yahay (‘mushaharka’) dembiyadeenna waa ‘dhimasho’. Geeridaan uun baa dalooli doonta waayo waxay qancisaa caddaaladda Ilaah. Dadaallada aan ku doonayno inaan ku helno mudnaan waxay la mid yihiin isku dayga in lagu daaweeyo kansarka (oo keena dhimasho) iyadoo la cunayo cunto xalaal ah. Cunista xalaal ma xuma, way fiicantahay – oo qofku waa inuu xalaal cunaa – laakiin ma daaweyn doono kansarka. Kansarka waxaad u baahan tahay daaweyn gebi ahaanba ka duwan oo geerida unugyada kansarka.
Markaa xitaa dadaalkeenna iyo ujeeddooyinkayaga wanaagsan si aan u soo saarno mudnaan diimeed dhab ahaan waxaannu nahay kuwo
Dembigeennu wuxuu keenaa dhimasho – Waxaannu Ilaah hortiisa ku nahay mayd aan nadiif ahayn
Ibraahim – oo tusaya Jidka Toosan
Waxay ku kala duwanayd Nebi Ibraahim. Waxaa loo tiriyey ‘xaqnimo’, ma aha mudnaantiisa laakiin wuxuu rumaystay oo aaminay ballanqaadkii isaga loo ballanqaaday. Waxa uu Ilaahay ku kalsoonaa in uu daboolo lacagtii loo baahnaa, halkii uu isagu kasban lahaa. Waxaan ku aragnay allabarigiisii ​​weynaa in dhimashadii (bixinta dembiga) la bixiyey, laakiin aan la siin wiilkiisa ee ay tahay beddelkii wankii Ilaah bixiyey.
Ibraahim waxaa la tusay Jidka Toosan- Wuxuu si fudud u aaminay Ballankii Eebbe oo Eebbe wuxuu bixiyay bixinta dhimashada dembiga
Qur’aanku wuxuu arrintaas kaga hadlay Suuradda As-Saffat (Surah 37-Kuwa Darajooyinka Dejiyey) halka uu ku leeyahay:
Suuradda As-Saffat37: 107-109
Eebbe ‘wuu soo furtay’ (wuu bixiyey qiimihii) Ibraahimna wuxuu helay barako, naxariis iyo cafis, oo ay ku jirto ‘nabad’.
Warka Wanaagsan: Shaqada Ciise Masiix oo annaga naga wakiil ah
Tusaalaha nebiga ayaa jira si uu noo tuso Jidka Toosan si waafaqsan codsiga Suuratul Faatixa (Suuradda 1-Furitaanka)
Xukunka maalinta abaalmarinta.
adiga unbaan ku caabudaynaa, adigaana gargaar waydiisanaynaa.
nagu hanuuni jidka toosan.
Jidka kuwaad u nicmaysay ee ma aha kuwa cadhooday iyo kuwa baadi ah toona.
Suuradda al-Faatixa 1: 4-7
Injilku wuxuu sharraxayaa in tani ay ahayd sawir muujinaya sida Eebbe u bixin doono dembiga oo u siinayo daw geerida iyo wasakhda si fudud laakiin awood leh.
Rooma 6: 23
Illaa iyo hadda wax walba waxay ahaayeen ‘war xun’. Laakiin ‘injil’ macno ahaan macnihiisu waa ‘war wanaagsan’ oo annagoo ku dhawaaqaya in allabarigii dhimashada Ciise uu ku filan yahay inuu daloosho xayndaabkan innaga iyo Ilaah waxaan arki karnaa sababta ay u tahay war wanaagsan sida ka muuqata.
Allabarigii Ciise Masiix – wankii Ilaah – wuxuu ku bixinayaa magdhow dembiga aawadiis sida wankii Ibraahim sameeyey.
Ciise Masiix waa la sadqeeyey ka dibna wuxuu ka soo sara kacay kuwii dhintay oo ahaa midhihii ugu horreeyay sidaa darteed wuxuu hadda na siiyaa noloshiisa cusub.Uma baahnin inaan sii ahaano maxaabiista dhimashada dembiga.
Sarakicidda Ciise waxay ahayd ‘midhihii ugu horreeyey’. Waxaan ka xoroobi karnaa geerida oo aan helnaa isla sarakicidda nolosha.
Isaga allabarigiisa iyo sarakicidiisa Ciise Masiix wuxuu noqday iridda laga soo galo dembiga that ina kala soocaya Ilaah. Sidaa darteed ayuu nebigu yiri:
Yooxanaa 10: 9-10
Ciise Masiix waa sidaas Albaabkii ka oo jibiyay xayndaabka dembiga iyo dhimashada
Albaabkan dartiis, hadda waxaan dib u heli karnaa xiriirkii aan la yeelannay Abuuraheennii ka hor inta uusan dembigeennu noqon caqabad waxaana naloo xaqiijin karaa inaan helno naxariis iyo cafiska dembiyadeenna.
Albaab furan hadda waxaan ku soo celinnaa Xiriirkii Abuurahayaga
Sida Injilku ku dhawaaqayo:
Waayo, waxaa jira Ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya Ilaaha iyo binu-aadmiga, waana ninka Ciise Masiix ah, oo isagu naftiisuu madax furashada u bixiyey dadka oo dhan. Tan hadda waxa laga markhaati kacay wakhtigii ku habboonaa
1 Timoteyos 2: 5-6
Hadiyadda Eebbe ku siiyay
Nebigu ‘wuxuu isu bixiyey’ dadka oo dhan ‘. Markaa tan waa inay ku jirtaa aniga iyo aniga. Dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa wuxuu ku bixiyay qiimaha inuu noqdo ‘dhexdhexaadiye’ wuxuuna na siiyaa nolol. Sidee noloshaan loo siiyaa?
Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimasho, laakiinse hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah xagga Rabbigeenna Ciise Masiix
U fiirso sida naloo siiyay. Waxaa loo bixiyaa sidii… ‘hadiyad’. Ka fikir hadiyadaha. Si kasta oo hadiyaddu tahay, haddii ay dhab ahaantii tahay hadiyad waa wax aadan u shaqayn oo aadan ku kasbanin mudnaan. Haddii aad kasbatay hadiyaddu hadiyad ahaan mayso – waxay noqon doontaa mushahar! Sidaas si la mid ah uma qalmi kartid ama ma kasban kartid allabari Ciise. Waxaa lagu siiyay hadiyad ahaan.
Taasi waa mid fudud. Oo hadiyaddu maxay tahay? Waa ‘nolosha weligeed ah’. Taas micnaheedu waa dembigii aniga iyo adiga geerida keenay hadda waa la bixiyay. Ilaah aad iyo aad ayuu u jecel yahay aniga iyo adiga.
Taasi waa mid awood leh. Haddaba sidee baan aniga iyo adiga u helnaa nolosha weligeed ah? Mar labaad, ka fikir hadiyadaha. Haddii qof doonayo inuu ku siiyo hadiyad waa inaad ‘heshaa’. Mar kasta oo hadiyad la bixiyo waxaa jira laba beddel oo keliya. Ama hadiyadda la diido (“Maya mahadsanid”) ama waa la helaa (“Waad ku mahadsan tahay hadiyaddaada. Waan qaadan doonaa”). Sidaas oo kale hadiyaddan waa in la helaa.
Ma aha oo kaliya in maskax ahaan la rumaysan karo, la baran karo ama la fahmi karo. Si aad waxtar u yeelato, hadiyad kasta oo lagu siiyo waa in aad ‘heshaa’.
Dhab ahaantii, Injiilku wuxuu Ilaahay sidaas ka sheegayaa
Ilaaha Badbaadiyeheenna ah, oo doonaya in dadka oo dhan badbaadaan …
1 Timoteyos 2: 3-4
Isagu waa Badbaadiye oo rabitaankiisu waa in ‘dadka oo dhan’ ay helaan hadiyaddiisa oo ay ka badbaadaan dembiga iyo dhimashada. Haddii tani ay tahay doonistiisa, markaa in hadiyaddiisa la helo waxay noqon lahayd mid u hoggaansamaysa doonistiisa – oo ah macnaha erayga ‘Muslim’ – qof soo gudbiya.
Sideen ku helnaa hadiyaddan? Injiilku wuxuu leeyahay
Mid kasta oo magaca Rabbiga ku baryaa waa badbaadi doonaa
U fiirso in ballan -qaadkani yahay mid loogu talagalay ‘qof walba’. Tan iyo markii uu ka soo sara kacay kuwii dhintay Ciise Masiix wuu nool yahay xataa hadda. Markaa haddaad isaga u yeerato wuu ku maqli doonaa oo ku siin doonaa hadiyaddiisa. Adigu waad u yeedhah kartaa oo weyddiisan isaga. Waxaa laga yaabaa inaadan waligaa sidan samayn. Hoos waxaa ku yaal hage ku caawin kara. Ma aha heesta sixirka. Ma aha ereyada gaarka ah ee awoodda bixiya. Waa kalsoonidii sida Ibraahim oo kale aan u siinay Ciise Masiix inuu na siiyo hadiyaddan. Sidaan isaga u aaminno wuu na maqli doonaa oo wuu noo jawaabi doonaa. Injilku waa mid awood badan, haddana aad u fudud. Xor baad u tahay inaad raacdo tilmaantan haddii aad u aragto inay waxtar leedahay.
Nabiga qaaliga ah iyo Rabbi Ciise Ciisow Waxaan fahansanahay in dembiyadayda na kala waday Abuuraheyga Ilaah. In kastoo aan aad iskugu dayi karo, dadaalkaygu ma dalooliyo caqabaddan.
Laakiin waxaan fahansanahay in geeridaadu ahayd allabari lagu maydho dembiyadayda oo dhan oo layga nadiifiyo. Waan ogahay inaad ka soo kacday kuwii dhintay allabarigaaga ka dib sidaa darteed waxaan rumaysanahay in allabaryadaadu ku filnayd sidaa darteedna waan kuu soo dhiibay. Waxaan kaa codsanayaa inaad iga nadiifiso dembiyadayda oo aad dhex -dhexaad ka ahaato Abuurahayga si aan u helo nolol weligeed ah. Waad ku mahadsan tahay, Ciise Masiix, inaad waxan oo dhan ii samaysay oo hadda xitaa ma sii wadi doontaa inaad i hagto noloshayda si aan kuugu raaco sida Eebahay.
Waxaan kugu weydistay magaca Ilaaha deeqsiga ah
Tags:Waa maxay farriinta Kitaabka - Buugga?